Yubbe waa degmo ka tirsan gobolka sanaag, waxay dhanka bariga ka xigta qiyaas ahaan 60km magaalo madaxda gobalka cergaabo. Waa magaalo taarikhiya waxay leedahay dhul bilic ahan soo jiidasho heer sare ah leh.
Juquraafi ahaan Yubbe waxay ku taalaa goob istaraatiiji ah, Waxa ku yaala buuro iyo beero aad u waawayn. Deegaan ahaan waxaa hoos taga dhul aad u balaadhan oo ay ka midyihiin tuulooyinka iyo deeganadan hoos ku xusan.
tuulad ninku jooge
Deegaanada hoosyimaada waxa ka mida
dooxada damal jabay
dooxada caqa sudh
dooxada ceelal higlo
dooxada geed quraan
Degmooyinka Gobolka Sanaag
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Yubbe&oldid=201611"